Umthombo nemikhiqizo yawo yemilingo
Umthombo ungomunye wezinto eziwusizo kakhulu ngokwezinto ezise-esoteric kuzo zonke izindlu. Umthombo kanye nemizwelo idala futhi iyancipha imizwa, umoya uvuselela, kanti futhi ikusasa lingabikezelwa kuso.
Amanzi amanje noma agelezayo afakwe ohlwini lwalezi zibuko ezikuthakazelisayo futhi ubuke le nqubo amahora. Amanzi ageleza, adonsela iso futhi akwenze ukuphazanyise izinkathazo nezinkathazo zasemhlabeni.
Manje akekho ulwazi olunembile, owakhele umthombo wokuqala wezwe. EGrisi lasendulo, imithombo yayigcwele iziphethu ngamanzi asetshenziselwa ukuchelela, ukupholisa emoyeni nokwenza imikhosi yemikhosi, futhi ngokwayo, ukucima ukoma.
Kamuva isintu safunda ukudala imithombo yamanzi, futhi ayizange ilahlekelwe imfanelo yayo yemilingo futhi ibe yinto ebalulekile ekwakhiweni kwezakhiwo ngesikhathi sokuvuselela. Umthombo ekubonweni kokuqala ngumsebenzi ojwayelekile wamanzi, kodwa amaGreki ayinikela nge-sacral value. Kwakusemthunzini wemithombo lapho amadoda ahlakaniphile nabafilosofi bahlela khona indalo yabo ebaluleke kakhulu.
Abantu baqaphela masinyane ithonya elihle lemithombo kumuntu. Abapristi namadoda ahlakaniphile babevame ukusebenzisa imithombo emithonjeni yabo. Esikhathini sethu kukhona umkhosi wokuphonsa imali emthonjeni, kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi kusekelwe kuphi.
ERoma lasendulo, lo mthombo waphonswa izinto ezincane kakhulu, amatshe amatshe, amaketanga kanye namadayisi akhethekile. Kwakuyimithombo eyayiqhutshwa emthonjeni owabeka kuqala isinqumo esihle noma esibi somphumela womuntu. Abantu abacebile baphonsa i-dice emthonjeni futhi ngemva kwalokho amathambo anenhlanganisela yokuwina azama ukukhipha abampofu emthonjeni, kanti amathambo enenhlanganisela engeyona eyinqobe aqhubeka elala phansi emithonjeni.
Ukuze kube nemikhuba yemilingo, isibuko sasetshenziselwa, esangena emthonjeni ngamaketanga ensimbi. Abantu bathandaza ethempelini futhi bashisa impepho futhi emva kokuba umhlatshelo ubheke esibukweni ukuze bathole ikusasa labo. Uma esibukweni umuntu ebona ubuso bakhe ngemibala emnyama, kwakusho ukufa okuseduze, uma kunemibala eluhlaza, lokho kwakusho ukugula, kepha uma ubomvu, lowo muntu ulindele impilo nenhlalakahle.
Abantu babemi emgqeni izinsuku nezinsuku ukuze babuke esibukweni esinjalo, futhi abacebile kakhulu nabangapheliyo bazithengela imali enkulu emgqeni onjalo. Lokhu kuyiqiniso elingenakuphikwa futhi eliqinisekisiwe lokholo oluqinile lwabantu basendulo emlonyeni wamanzi.
Esikhathini sethu, inhlanhla kanye nenhlanhla kubantu abavamile ziletha isifuba ngesimo somthombo. Uma ukholelwa ezakhiweni ezisezingeni eliphezulu zezinto ezithile, khona-ke kufanele nakanjani uthole umthombo wakho ekhaya.
Umthombo, njengamaShayina yakudala ayekholelwa, uyakwazi ukuthuthukisa amandla kwanoma yiziphi izindawo zokuhlala, futhi nokuletha impilo empilweni enkulu. Ngesikhathi esifanayo, kuyadingeka ukuyibeka kahle endlini yakho, okungukuthi, kuleso sigaba sendlu esiphethe isakhi samanzi, hhayi esinye isici.
Isibonelo, ingxenye engaseningizimu yendawo yokuhlala ibhekene nesici somlilo futhi uma ubeka umthombo kule ndawo yegumbi, khona-ke izimo ezingqubuzanayo ngokulandelana komzimba zingenakugwemeka.
Ngo-Feng Shuyu ukuheha imali udinga ukubeka umthombo eduze nomsebenzi.
Uma usuvele usuthole umthombo, kubalulekile ukuthi amanzi kuwo ahlale ehlanzekile futhi kungenaso isimo esiqhubekayo. Ngakho udinga ukukhetha umthombo ngokulindela ukuthi kungasetshenziswa kalula.
Amanzi avela emthonjeni akufanele aphume, futhi injini kufanele isebenze ngokuthula. Izinzuzo zomthombo ziningi, ngakho-ke uma ungakabi nazo okwamanje, hlola ngokucophelela umthombo, mhlawumbe kuzoshintsha impilo yakho futhi ukulethe imibala enjalo kanye nezinzwa ongazange uziphuphe.
Amahlaya wesifazane ahluke kanjani kumadoda?
I-Psychotherapist "Yesenin" - indlela yokuzijabulisa ngayo
Iqalekisa: indlu, abazali, isonto
I-psychology ehlobene nobudala, umjikelezo ogcwele wokuphila komuntu
Kungani amaJapane ahlala isikhathi eside kangaka?
Ungakwazi ukuthonya ikusasa lakho?
Ingqungquthela ye-press Vladimir Putin: izikhathi eziqhakazile
I-Girala mardelade ekhaya, iresiphi ngesithombe esisekelwe ekuphenduleni
Ama-sandwiches amafushane ngama-apula
Gcoba kusuka kubhontshisi obuluhlaza kanye nepelepele elimnandi
Izindlela zokuhlolwa komzimba
Isaladi "Ngaphansi koboya obubomvu" nolwandle olwandle
Inkanyezi ye-"Quartet I" uLeonid Baratz ugxeke ukwesekwa kukaNavalny
Ubani ofuna amathoyizi avela esitolo socansi?
Yiziphi izinqubo ezivunyelwe kwabesifazane abakhulelwe?
Ama-Shades aseMedithera eqoqweni elisha leCartier
Izitsha ezivela inyama yonyaka omusha we-2015, iresiphi ngesithombe
Amathiphu wokunakekela izimbali zasekhaya